Welldone Electronics Ltd. waxay siisaa faa'iidooyin badan macaamiisheenna u baahan wadaagista macluumaadka gaarka ah ee macaamiisheenna. Welldone Electronics Ltd. waxay qaaddaa taxaddar kasta si loo ilaaliyo tallaabooyinka amniga ee macaamiisheenna.
Sida aan u kaydinno una isticmaalno macluumaadkaaga
Macluumaadka aad bixiso markaad diiwaangelineyso inaad isticmaasho iyo inta aad isticmaaleyso websaydhada annaga ayaa isticmaali kara:
Ujeeddooyinkaaga isticmaalka boggayaga internetka, oo ay ku jiraan inaad kula soo xiriirto wixii su'aal ah ee aad soo sheegto;
Si aan kula soo xiriiro markii dambe si aan kuugu wargaliyo ogeysiisyada kale, dalabyada gaarka ah, wax soo saarka, adeegyada ama dhacdooyinka laga helo Welldone Electronics Ltd., la-hawlgalayaasheeda, iyo la-hawlgalayaasha ganacsiga saddexaad ee saddexaad oo aan u malayno inay runti adiga dan kuu yihiin. Waxaan marwalba ku siin doonaa ikhtiyaarka inaadan lagula soo xiriirin qaabkan ama gabi ahaanba waxaadna jimicsi kartaa xulashadaas wakhti kasta.
Ujeeddooyinka maamulka ama inay naga caawiso horumarinta iyo hagaajinta waxa aan bixinno;
Ujeeddooyinka kahortagga dembiyada ama ogaanshaha.
Isku gudbinta macluumaadka ee internetka had iyo jeer had iyo jeer ma ahan mid amaan ah. Ma damaanad qaadi karno amniga xogtaada loo gudbiyey bartayada; gudbinta kasta waxay ku jirtaa khatartaada. Marka aan helno macluumaadkaaga, waxaan shaqaalaynaa astaamaha amniga si aan isugu dayno inaan ka hortagno marinka aan la oggolaan.
Haddii aadan mar dambe rabin inaad hesho isgaarsiinta xayeysiinta ee Shirkadda, waad ka bixi kartaa "helitaanka" adoo raacaya tilmaamaha ku jira xiriir kasta ama iimaylka shirkadda ee welldone@welldonepcb.com